Tsy milalao Voicemail ny iPhone-ko! The Fix! [Verizon, AT&T, & T-Mobile] - Iphone
fiainana bateria amin'ny ipad mini
ny fotoana tsy tapaka mangataka tenimiafina
maody mainty sy fotsy iphone
iphone 4 tsy hovonoina
gmail amin'ny iphone tsy manavao
Tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ny Voicemail ary tsy fantatrao izay hatao. Tena mahasosotra tokoa izany raha tsy mandeha ny mailaka, indrindra raha manantena antso an-tariby manan-danja avy amin'ny namana na olona ao amin'ny fianakaviana ianao. Ao amin'ity lahatsoratra ity, Hasehoko anao ny zavatra tokony hatao raha tsy milalao mailaka ny iPhone mba hahafahanao manamboatra ny olana ho tsara.
Inona no tsy mety amin'ny iPhone-ko? Tokony hiantso ny mpitondra ahy ve aho?
Amin'ity fotoana ity dia tsy azontsika antoka tsara hoe maninona ny iPhone-nao no tsy hanao feon-telefaona. Ilay voicemail izay lalaovinao amin'ny app Phone amin'ny iPhone-nao dia antsoina Voicemail Visual , izay misintona ny mailakao avy amin'ny mpitatitra anao amin'ny endrika fisie raki-peo kely, mitovy amin'ireo rakitra mozika henoinao ao anatin'ny fampiharana Music.
Rehefa tsy mandeha amin'ny iPhone-nao ny voicemail, betsaka ny olona no mihevitra fa misy ny olana amin'ny findainy, ka miantso avy hatrany ny Verizon, AT&T, T-Mobile, na ny laharana fanohanan'ny mpanjifa mpitatitra hafa. Na izany aza, betsaka amin'ny fotoana no olana tena ateraky ny olan'ny lozisialy amin'ny iPhone mihintsy.
Voicemail Tsy mandeha amin'ny iPhone? Ity no antony
Misy antony roa lehibe mahatonga ny iPhone tsy milalao mailaka:
ny fomba fanakanana ny antso rehetra mety hisy
Ny iPhone-nao dia tsy misintona voicemails avy amin'ny mpitatitra tsy misy tariby na
Tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fampiharana finday amin'ny iPhone-nao
Ny torolàlana momba ny famahana olana dia hanampy anao hamantatra sy hanamboatra ny antony tsy mandeha amin'ny mailakao amin'ny iPhone ny mailakao!
Alohan'ny hidirantsika amin'ny dingana famahana olana dia alao antoka fa manana Visual Voicemail napetraka amin'ny iPhone-nao ianao. Sokafy ny fampiharana an-tariby amin'ny iPhone-nao ary tap Voicemail eo amin'ny zoro ambany ankavanan'ny efijery. Raha hitanao “Raha te haka mailaka am-peo dia apetraho aloha ny teny miafina sy ny fiarahabana” eo amin'ny efijery ary koa ny bokotra izay milaza Amboary izao , avy eo ny Visual Voicemail dia tsy natsangana tamin'ny iPhone-nao.
Raha hametraka Voicemail Visual dia tsindrio Amboary izao . Hasaina hiditra sy hanamafy tenimiafinao mailaka ianao. Manaraka izany, hanana safidy ianao hisafidy ny fiarahabana mailaka default na handraikitra ny anao manokana. Raha te-firaketana ny fiarahabana nataonao manokana ianao dia tsindrio fanao . Raha vantany vao niditra ianao dia namorona ny teny miafinao ary nifidy ny fiarahabanao, dia ho afaka handray mailaka ianao ary hijery azy ireo amin'ny fampiharana finday.
Soso-kevitra Pro: Azonao atao ny manamarina indroa raha misy voicemail napetraka ao amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny antso an-tariby sy fiantsoana ny nomeraon-telefaonanao manokana ao amin'ny Keypad of the Phone app, na amin'ny fiantsoana ny iPhone anao amin'ny alàlan'ny telefaona hafa.
Maninona ny iPhone-nao no tsy hilalao voicemail - The Fix!
Manakatona ary mamoha ny fampiharana finday
Araka ny efa nolazaiko tetsy aloha, ny iray amin'ireo antony iraisana mahatonga ny iPhone tsy hilalao mailaka dia satria tsy mandeha tsara ny app Phone. Ny fanidiana sy ny fanokafana ny rindrambaiko finday dia mamela azy 'hikatona' ary hanomboka indray, izay indraindray afaka manamboatra glitch software.
iphone x apps tsy misintona
Manakatona ny fampiharana finday, manomboka amin'ny fanindriana indroa ny bokotra Home. Ity dia hanokatra ny App Switcher, izay hampiseho ireo fampiharana rehetra anananao misokatra amin'ny iPhone-nao ankehitriny. Ampiasao ny rantsan-tànanao hamafa ny rindranasa finday. Ho fantatrao fa mihidy ny fampiharana finday rehefa tsy miseho intsony ao amin'ny App Switcher.
Vonoy ny iPhone anao ary avereno
Indraindray, ny fanomezana fanombohana vaovao ny iPhone amin'ny alàlan'ny famonoana azy sy ny famerenana indray dia afaka mamaha olana momba ny rindrambaiko madinidinika. Ohatra, raha nianjera tany aoriana ny rindrambaiko an'ny iPhone dia mety nanjary tsy mandeha amin'ny laoniny ilay rindrambaiko finday.
Mba hamonoana ny iPhone dia tsindrio ary tazomy ilay bokotra herinaratra mandra-pahitanao ny sary mena ary solafaka hiala amin'ny herinaratra miseho amin'ny fampisehoana ny iPhone. Ampiasao ny rantsan-tananao, atsofohy avy eo ankavia miankavanana ny kisary mena. Andraso sahabo ho 30 segaondra alohan'ny hamerenanao ny iPhone, ho azo antoka fa ho faty tanteraka izy io.
Midira ao amin'ny kaonty mpitatitra tsy misy tariby anao ary ovao ny teny miafinao Voicemail
Ny mpitatitra sasany dia mitaky anao hamerina ny teny miafina mailaka ho toy ny fepetra fiarovana rehefa mahazo iPhone vaovao. Indraindray, ny fanavaozana azy amin'ny tanana amin'ny Internet na amin'ny fiantsoana ny fanohanan'ny mpanjifa dia afaka mamerina ny fifandraisan'ny iPhone amin'ny mpizara voicemail ary manamboatra ny olana.
Fa nieritreritra aho fa tsy nanana tenimiafina ny iPhone Voicemail!
Ny iPhone dia manana teny miafina voicemail, fa indray mandeha monja no tokony hidiranao azy ary iPhones maro no manangana azy ho azy. Na izany aza, mbola mila misy endrika fanamarinana eo amin'ny mpitatitra anao sy ny iPhone-nao mba hampidinana ireo mailakao. Na dia tsy hitanao aza izany dia mbola misy ny teny miafim-mailanao.
Ahoana ny fanovana ny teny miafinao Voicemail raha toa ka mitondra anao i Verizon
Azonao atao ny manova ny teny miafim-mailakao avy amin'ny iPhone amin'ny fiantsoana (800) -922-0204 . Hahatratra menio serivisy ho an'ny mpanjifa mandeha ho azy ianao izay hahafahanao manova ny teny miafinao amin'ny mailaka. Raha te hahalala bebe kokoa dia zahao ny Verizon's lahatsoratra fanohanana momba ilay lohahevitra.
Ahoana ny fanovana ny teny miafinao Voicemail raha AT&T no mpitatitra anao
Azonao atao ny manova ny teny miafim-mailanao amin'ny alàlan'ny fiantsoana (800) -331-0500 avy amin'ny iPhone-nao. Ho tratranao ny menan'ny serivisy ho an'ny mpanjifa AT & T izay hangataka ny nomeraon-telefaonanao sy ny kaody zip anao. Segondra vitsy taty aoriana dia hiseho eo amin'ny fampisehoana ny iPhone ny hafatra hoe 'Tsy mety ny teny miafina - Ampidiro ny tenimiafin'ny Voicemail'. Ampidiro ny tarehimarika fito farany amin'ny nomeraon-telefaonanao hanovana ny teny miafim-mailakao. Manoro hevitra mafy anao aho hamaky ny AT & T's
inona no hatao rehefa lasa mainty ny efijery iphone-nao
Ahoana ny fanovana ny teny miafinao Voicemail raha T-Mobile no mitondra anao
Dial 123 na antsoy ny 1-805-637-7249 ary ampidiro ny nomeraon-telefaoninao. Avy eo, tsindrio ny 5 hankanesanao ao amin'ny menio Security Security. Farany, tsindrio 1 hanovana ny teny miafim-mailakao. Zahao ny T-Mobile's lahatsoratra fanohanana voicemail hianatra bebe kokoa!
Rehefa mamerina ny fikirakira tamba-jotra ianao, hamafana ny Wi-Fi iPhone sy ny fikirakirana tambajotra findainao rehetra. Anisan'izany ny sehatr'asa Virtual Private Network (VPN), ny fitaovanao Bluetooth, ary ny tamba-jotra Wi-Fi anao - koa alao antoka fa manoratra ny teny miafinao aloha ianao!Izahay dia manao an'io dingana io satria mety ho sarotra be ny manara-maso ny loharanon'ny olana iray amin'ny lozisialy, noho izany dia averinay indray rehetra fananganana tambajotra.
To Reset Network setting, manomboka amin'ny fanokafana ny Fikirana fampiharana. Manaraka, tap General -> Reset -> Avereno ny fametrahana ny tambajotra ary ampidiro ny passcode-nao. Hamerina amin'ny laoniny ny fikirakira tamba-jotra ny iPhone-nao ary hanomboka azy indray.
Olana amin'ny mailaka: raikitra!
Namboarinao ny olana amin'ny iPhone-nao ary afaka mihaino ny mailakao indray ianao izao! Alao antoka fa fantatry ny namanao sy ny fianakavianao ny zavatra tokony hatao raha tsy hilalao feon-tserasera ireo iPhones-ny amin'ny fizarana an'ity lahatsoratra ity amin'ny media sosialy. Misaotra tamin'ny famakiana, ary aza misalasala mametraka hevitra etsy ambany raha manana fanontaniana hafa momba ny iPhone ianao.